What percentage of Zimbabwe is in poverty? - Hai Afrika!
Where does Zimbabwe rank in poverty?
How many people in Zimbabwe are below the poverty line?
What is the unemployment rate in Zimbabwe in 2019?
Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) in Zimbabwe was reported at 38.3 % in 2019, according to the World Bank collection of development indicators, compiled from officially recognized sources.
Zimbabwe unemployment rate for 2019 was 4.95%, a 0.13% decline from 2018. Zimbabwe unemployment rate for 2018 was 5.09%, a 0.08% decline from 2017. Zimbabwe unemployment rate for 2017 was 5.17%, a 0.09% decline from 2016.
The results of the study showed that the acute causes of poverty in Zimbabwe include corruption, high unemployment rates, underperforming banking system, lack of foreign investment, underperforming industries and poor infrastructure.